Biyo budada VS Cetilistat budada ah Aasarwoorka steroid ah
/blog/cetilistat , cayilka/Biyo budada VS Cetilistat budada
Posted on 12 / 01 / 2017 by 阿斯劳 ku qoray cetilistat, cayilka.
Waa maxay budada cayilku?
cayilka waa xaalad qofku uu ku ururay dufan badan oo jirka ah taasi oo saameyn taban ku yeelan karta caafimaadkiisa.Haddii miisaanka jirka qofka uu ugu yaraan 20% ka sarreeyo sidii la rabay, waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay qof buuran. Haddii Jirkaaga Miisaanka jirka (BMI) uu u dhexeeyo 25 iyo 29.9 waxaa laguu tixgelinayaa inuu culus yahay. Haddii BMI-gaagu yahay 30 ama ka weyn waxaa laguu tixgelinayaa inuu cayillan yahay.
Cayilka ayaa ah sababta ugu horeysa ee looga hortago dhimashada adduunka, iyada oo la kordhinayo heerka dadka waaweyn iyo carruurta. 2015, dadka waawayn ee 600 (12%) iyo carruurta 100 million waxay ahaayeen kuwo cayilan. Cayilka ayaa ka badan dumarka ragga. Mas'uuliyiintu waxay u arkaan inay tahay mid ka mid ah dhibaatooyinka caafimaadka dadweynaha ee ugu weyn ee qarniga XNUMkoobiya. Jacaylku waa mid caado u leh dunidan casriga ah (gaar ahaan caalamka galbeedka), inkasta oo loo arkay calaamad ku saabsan maaliyadda iyo bacriminta mararka kale ee taariikhda oo weli ku sugan qaybo ka mid ah aduunka. 21, Ururka Caafimaadka Maraykanka ayaa qeexay cayilka sida cudur.
Sababta budada cayilka
Budada cayilku waxaa badanaa keena isku-dhafka cunnada xad-dhaafka ah, la'aanta dhaqdhaqaaqa jidhka, iyo ciladda jeermiska. Kiisas yar ayaa ugu horreyntii sabab u ah gen, cillado endocrine, daawooyin, ama jirro maskaxeed. Aragtida ay dadka caanuhu cunaan wax yar maaha miisaan culus sababtoo ah dheef-shiid kiimikaad gaabis ah guud ahaan looma taageero. Celcelis ahaan, dadka cayilku waxay leeyihiin kharash aad u sarreeya oo ka sarreeya kuwa dhiggooda caadiga ah sababtoo ah tamarta looga baahan yahay inay sii wado korodhka jidhka.
Cilmi baaris ayaa soo jeedisay in haddii aadan hurdo kugu filneyn inaad halis u noqoto inaad noqotid labis. Cilmi-baaris ayaa lagu qabtay Warwick Medical School ee Jaamacadda Warwick. Khatartu waxay khuseysaa dadka waaweyn iyo carruurta. Professor Francesco Cappuccio iyo kooxda ayaa dib u eegay caddayn ku saabsan carruurta 28,000 iyo dadka waaweyn ee 15,000. Cadaymahoodu waxay si cad u muujiyeen in hurdada laga yareeyo hurdada ay si weyn u korodhay khatarta cayilka labada kooxood.
Khataraha budada cayilka
Miisaanka jidhka ee xad-dhaafka ah wuxuu la xiriiraa cudurrada iyo xaaladaha kala duwan, gaar ahaan cudurrada wadnaha iyo xididada, nooca sonkorowga miyirka ee 2, apnea uur-jiifka ah, noocyada kansarka, osteoarthritis iyo neefta. Natiijo ahaan, cayilka ayaa la ogaaday in la yareeyo rajada nolosha.
Sidee loo xalliyaa dhibaatada cayilku?
Cayilka ayaa badanaa laga hortegi karaa iyada oo loo marayo isu-geyn bulsheed iyo doorashooyin shakhsiyeed. Isbedelka cuntada iyo jimicsiga ayaa ah daaweynta ugu muhiimsan. Tayada cuntadu waa la hagaajin karaa iyada oo la yareeyo isticmaalka cuntooyinka tamarta cufan leh, sida kuwa sare ee dufanka iyo sonkorta, iyo kordhinta qaadashada fiyuusta cuntada. Qalabka cuntooyinka waxaa loo isticmaali karaa, oo ay weheliso cunto ku haboon, si loo yareeyo cunto xumo ama yareynta baruurta Cunto, jimicsi, iyo daaweyntu maaha kuwo waxtar leh, mashiinka caloosha ama qalliinka ayaa laga yaabaa in la sameeyo si loo yareeyo miisaanka ama dhererka mindhicirka, taasoo keenta in uu dareemo awood buuxda oo horay ama hoos u dhac ah si uu u nuugo nafaqooyinka cuntada.
Dufanka Cetilistat VS Obesity
Cetilistat budada cayriin waa daroogo miisaan lumis ah oo loo isticmaalo in lagu daro cunto kalooriye yar. Waxay ka shaqeysaa adoo joojiya xaddi badan oo dufan ah oo ka timaada in la dheefshiido oo lagu nuugo jirka. Daawadani waxay u dhigantaa lipase inhibitor waxayna si toos ah uga shaqeysaa nidaamka dheef-shiidka halkaasoo ay ka horjoogsanayso ficilka unugyada lipolytic la yiraahdo lipase. Dareemahaasi waa waxa uu jidhku u isticmaalo si uu u dheefshiido dufanka. Hase yeeshe, marka daawadan la qaato cuntada, waxay ku xidhan tahay nuucyada, taas oo ka hor istaageysa inay jabiso dufanka. Dufanka aan la daboolin waxa loo beddelaa saxarada, taas oo keentay kororka dufanka xajinta iyo hoos u dhigidda baruurta. Marka la wada isticmaalo cunto yareeyaal kaloori ah, waxay kaa caawin kartaa hagaajinta miisaanka oo aad u fududeeyso bukaansocodka culus si ay dib ugu noqdaan muuqaal ahaan, taas oo kordhinaysa fursadaha miisaanka guul darrada leh.
Cuntilistat daawada budada ah
Cetilistat waxaa loo bixiyaa kaabsollo 60mg oo xoog ah oo loogu talagalay maamulka afka. Daawada waxaa lagu qaataa cuntada si loo hubiyo inay shaqeyn karto inta cuntada la shiideynayo, si nuugista dufanka ee cuntada ay si wax ku ool ah hoos ugu dhacdo. Dhakhtarkaaga ayaa kaala talin doona inta daawo ee aad ku qaadanayso qiyaas kasta, iyo sidoo kale qiyaasta maalinlaha ah ee loo baahan yahay. Aad ayey muhiim u tahay inaad u hogaansanaato tilmaamahan. Ha qaadan wax ka badan inta dhakhtarkaagu kuu sheego inaad qaadato.
In kastoo budada cayriin Cetilistat ay ku caawin karto miisaannada bukaanka waxay lumiyaan miisaanka oo markaa waxay yareeyaan halista sonkorowga ama xaalado kale oo halis ah oo la xidhiidha cayilka, waxa kale oo laguu sheegi doonaa dhakhtarkaagu inuu cuno cunto yar oo kalooriye ah iyo inuu si joogto ah u jimicsado.
Waxyeelada budada Cetilistat
Bukaannada lagu daaweynayo buurnida leh budada Cetilistat waxay la kulmi karaan waxyeelo. Waa inaad u sheegtaa dhakhtarkaaga haddii tani dhacdo. Tusaalooyinka qaarkood ayaa halkan lagu bixiyay:
Steatorrhea (saxaro daboolan)
Kala soocista dharka
Dhibaatooyinka la xakameynayo dhaqdhaqaaqa mindhicirka
Tags: iibso budada Cetilistat, iibso budada caanaha, Dufanka Cetilistat, Budada cayilku
Labada hormoon ee hormoonka jinsiga Raw Jinyang Alkali budada	Qofna kuma sheegi doono xaqiiqooyinka 10 ee ku saabsan Trenbolone Acetate